Jawaabta wakaaladda ee COVID-19 - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Jawaabta wakaaladda ee COVID-19
Soo-koobidda dadaallada jawaabta ee COVID-19 ee Ganacsiga
Cudurka faafa ee 'COVID-19' ma uusan keenin kaliya dhibaato caafimaad oo bulshada ah, laakiin sidoo kale dhibaato dhaqaale. Tan iyo bilowgii jawaabta gobolka, Ganacsigu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray bixinta gargaarka degdegga ah ee loo baahan yahay iyo taageerada ganacsiyada, dowladda hoose, Qabiilooyinka, ururada aan macaash doonka ahayn iyo qoysaska dhibaataysan. Tani waa soo koobid ku saabsan dadaallada waxqabadka hay'adda ee COVID-19.
Guudmarka lacagaha degdegga ah ee ay qaybiyeen Ganacsiga
Ganacsiyada iyo kuwa aan macaash doonka ahayn
$ 415M gudaha Shaqada Washington (WW) deeqaha ganacsiyada yar yar ee degdegga ah (WW)
$ 10M Wareega 1: $ 10,000 ilaa 1,400 meheradood
$ 15M Wareega 2 adoo adeegsanaya ADO-yada: $ 2500- $ 10,000 ilaa ganacsiyada 1,570
$ 100M Wareega 3: $ 12,500 oo lagu qiyaasey 7,823 meheradood (oo ay ku jiraan $ 4,500 ilaa qiyaastii. 660 qaataha deeq bixiyeyaasha adkeysiga ee ku dhacay meherado ku dhex leh qaybaha mudnaanta leh)
$ 240M Wareega 4aad: Deeqaha ilaa $ 30,000. Muddadii codsigu xirmay Abriil 9.
$ 50M Wareega 5aad: Waxaa ansixiyay Sharci dejinta waxaana lagu maalgeliyay miisaaniyada hawlgalka ee 2021-23. Barnaamijka wali socda.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaybinta deeqaha ganacsiga ee Washington, booqo warbixinteena is-dhexgalka.
$ 15M oo loogu talagalay qaybaha beeraha qaarkood: kuwa beera kalluunka qolofta leh, suuqyada beeraleyda, khamriga, kuwa kala bixiya, khamriga iyo khamriga, iyo agritoursim. Deeqdan waxaa iskaashi la lahaa Waaxda Beeraha ee Gobolka Washington. Muddadii codsigu xirmay Abriil 26. Qaybinta wali waa in lagu dhawaaqo.
$ 11M loogu talagalay Deeqaha Soo-kabashada Bulshada ee aan macaash doonka ahayn iyadoo lala kaashanayo ArtsFund. Muddada dalabku waa Maajo 10-Meey 24, 2021. Qeybinta weli waa in lagu dhawaaqo.
$ 2.25M si loogu taageero qolalka maxalliga ah, iyadoo lala kaashanayo Ururka Ganacsatada Washington.
$ 1M si loo taageero ururada dalxiiska, iyadoo lala kaashanayo Isbahaysiga Dalxiiska Washington.
$ 1M si loogu taageero ururada halyeeyada ah, iyadoo lala kaashanayo Waaxda Arimaha Halyeeyada ee gobolka. Barnaamijka wali socda.
$ 1M si loo taageero shirkadaha yaryar, iyada oo lala kaashanayo Ururka Gobolka Washington ee Microenterprise Association. Barnaamijka wali socda.
$ 18M deeqaha u adkaysiga ganacsiga: $ 8,000 ilaa qiyaastii 2600 ganacsiyo + $ dheeraad ah $ 4,500 ilaa kudhowaad 660 deeq bixiyeyaal oo waliba uqalma WW Wareega 3
$ 2.7M loogu talagalay Shabakad u-adkeysi Ganacsi Yar ururada bulshada ee lagu kalsoon yahay ee bixiya wacyigelinta iyo caawimaad farsamo mulkiilayaasha ganacsiyada yar-yar ee kala duwan siyaabo dhaqan ahaan iyo af ahaanba ku habboon.
$ 30M si loo abuuro barnaamij deyn soo kabasho cusub oo Flex Fund (barnaamijka socda)
$ 11.8M Kaalmada deeqda aan macaash doonka ahayn ku-macaamil-samafal iyadoo lala kaashanayo Philanthropy NW: deeqo la siiyay 358 aan macaash doon ahayn (liiska aragtida abaalmarinta)
$ 9.9M ilaa ururada horumarinta dhalinyarada iyadoo lala kaashanayo Iskuullada 'Out Out Washington': deeqo la siiyay 441 urur (liiska aragtida abaalmarinta)
$ 4.9M dheeraad ah si loo ballaariyo loona kordhiyo abaalmarinta codsadayaasha; qaybinta weli la shaacin doono.
$ 1.5M hay'adaha farshaxanka ee deeqda koowaad ee farshaxanka iyadoo lala kaashanayo ArtsWA: deeqaha la siiyay 252 urur (liiska aragtida abaalmarinta)
$ 300k waa deeq abuurka kalluunka: wuxuu caawiyay 43 beeraley ah
$ 1M Shaqaalaha Fasaxa Barnaamijka Fasaxa Mushaharka: caawiyay 32 loo shaqeeye
In ka badan $ 1.0b
Guryaha, kaalmada kirada, Qabiilooyinka iyo dawladaha hoose
$ 505M loogu talagalay kirada ($ 153M ERAP / $ 352M T-RAP 1.0): Barnaamijyada waxaa lagu maamulaa wada-hawlgalayaasha maxalliga ah waxayna lacagtu bixin doontaa qiyaastii 80,000+ qoys ilaa 13 bilood oo kiro ah
Sharci dejintu waxay ansixiyeen $ 658M dheeraad ah oo ah T-RAP 2.0 ee 2021-23 biennium laga bilaabo Julaay 1.
$ 3M loogu talagalay lacagaha kaalmada la wareegida guryaha si looga caawiyo milkiilayaasha guryaha inay ka fogaadaan la wareegida guryaha
$ 409M oo loogu talagalay 315 degmo, maamul magaalo iyo degmo oo aan u qalmin inay helaan maaliyad toos ah iyadoo la raacayo Xeerka DARYEELKA (faahfaahinta hoose)
$ 3.5M oo loogu talagalay deeqaha horumarinta bulshada (CDBG) lacagaha (faahfaahinta hoose)
$ 30M loogu talagalay Qabiilooyinka ay dowladdu aqoonsan tahay
$ 3M oo loogu talagalay ururada wadaniga ah ee magaalooyinka ka jira
$ 39.4M LIHEAP / kaalmada tamarta ee dakhligoodu hooseeyo ($ 16M oo toos uga socota HHS + $ 23M oo laga helo DARYEELKA 'Gov's CARES): oo laga maamulo wada-hawlgalayaasha deegaanka; u adeegay qiyaastii 23,433 qoys
$ 11.7M $ XNUMXM Xannibaadda Deeqda
$ 4.3M Deeqda Xalka Degdega ah
$ 7.5M Lacag Dheeraad ah oo loogu talagalay Coronavirus oo loogu talagalay Xafiiska U-doodista Dhibbanayaasha Dembiyada
Heerarka heerka-hoose ee lagu caawinayo ganacsiyada iyo u adeegidda bulshada
Abuuritaanka Shabakad Adkaysi Ganacsi Yar si loo siiyo taageero farsamo dhaqan ahaan iyo luuqad ahaan la xiriirta taakuleyn farsamo iyo taakuleyn milkiileyaasha ganacsiyada yar yar ee ay soo diraan fariimaha bulshada. Shabakaddu waxay ka bilaabantay 20 urur oo bulshada ka shaqeeya waxayna ku sii fidayaan 31.
$ 3.2 milyan ilaa 42 mashruuc oo qorshaynta daryeelka caruurta ah oo ka socda 27 degmo. Maalgalintan waxaa ka mid ah $ 1.8 milyan oo tabarucaad samafal ah oo ay hubisay Ganacsiga iyada oo loo marayo Sanduuqa Ammaan ee Bilowga, oo ay gacan ka geysteen Kooxda Ballmer oo la kaashanaya Seattle Foundation. Kuwani waa mashruucyo iskaashi bulsho oo loo wada dhan yahay si looga caawiyo buuxinta baahiyaha gaarka ah ee daryeelka carruurta ee bulshada ku nool gobolka.
$ 120k deeqda Child Care Aware ee Washington si loo siiyo bixiyeyaasha xanaanada cunugga sahay nadaafadeed, waji daboolan iyo waxyaabo kale oo badan
Hawlaha wakaaladda ayaa isbedela si shaqaaluhu ugu shaqeyn karaan si hufan ayna u xaqiijin karaan sii socoshada howlaha, oo ay ku jiraan hagaajinta nidaamka maaraynta qandaraaska iyo hirgelinta xulashooyinka saxiixa dukumiintiga elektarooniga ah.
Waxay ku dhiirrigelisay kooxda Hawlgelinta Bulshada inay ka shaqeeyaan deeqaha Washington ee shaqeeya iyo Shabakadda u-adkeysiga Ganacsiga Yaryar.
Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartan
Waxaa la abuuray Dashboardka Soo-kabashada Dhaqaalaha
Ka heshay $ 15M deeqda federaalka ee EDA xirmo ah Mashaariicda Badbaadada Bilowga ah
Markii boqollaal shirkadood ay ka jawaabeen wicitaankii Badhasaabka Inslee retool si aad u sameyso PPE, Shaqaalaha Ganacsiga iyo hawlwadeenada amaahda ee ka socda Impact Washington waxay ka shaqeeyeen inay ka caawiyaan shirkadaha muhimka u ah inay soo saaraan wax kasta oo ka yimaada nadaafadda gacmaha ilaa gaashaammada iyo wejiga wajiga.
La Ballaariyay Barnaamijka ScaleUp in lasiiyo tababaro iyo taageero bilaash ah 256 ganacsato yar yar oo iskudayaya inay maraan aafada
Loogu tala galay $ 35,000 deeqda USDA si loo baro ScaleUp: Barnaamijka COVID Edition ee 50 ganacsi oo ku yaal Kittitas iyo gobolada ku xeeran.
Dib u habeyn lagu sameeyay websaydhka ganacsiga yar yar ee ganacsiga si diirada loo saaro waxyaabaha la xiriira COVID iyo balaarinta qorshaynta musiibada iyo COVID waxyaabaha gaarka ah ee ku jira websaydhada Ganacsiga.
Kooxo ku dhiirrigeliyay inay ka shaqeeyaan deeqaha Washington ee shaqeeya, oo ay ku jiraan dib u eegista tobanaan kun oo codsiyo ah iyo ka baaraandegidda lacag-bixinta kuwa qaata iyo ka jawaabidda dhowr kun oo wicitaanno iyo emayllo ah milkiileyaasha ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn.
Adeegyada Bulshada iyo Guryeynta
$ 11.7M oo loogu talagalay Deeqaha Adeegyada Bulshada (CSBG) si wax looga qabto khalkhalka dhaqaale ee COVID-19. Barnaamijka ganacsiga ee CSBG wuxuu maareeyaa maalgelinta, kaalmada farsamada iyo taageerada Iskaashiga Waxqabadka Bulshada ee Gobolka Washington iyo 30 hay'adaha waxqabadka bulshada ee ku baahsan Washington oo dhan si loo siiyo dadka deggan guryo la awoodi karo, kaalmada tamarta, shaqada iyo waxbarashada, horumarinta hantida, cuntada degdegga ah, hoyga, nafaqada iyo daryeelka caafimaadka.
$ 3M oo loogu talagalay ururada wadaniga ah ee magaalooyinka ka jira si loo taageero gurmadka degdega ah ee cudurka faafa ee COVID-19. Tan waxaa ka mid ah jawaabta caafimaadka bulshada, shaqaalaha ka jawaab celinta xaaladaha degdegga ah, tas-hiilaadka caafimaadka iyo awoodaha telehealth, barnaamijyada ganacsiga iyo taageerada shaqada, iyo taageerada bulshada sida cuntada iyo guryaha Lacagtani waxay ku baxeen:
Xarunta Bulshada Hindida Mareykanka
Guddiga Caafimaadka Hindida Mareykanka
Naadiga Chief Seattle
Guddiga Caafimaadka Hindida Seattle
Machadka Caafimaadka Hindida ee Magaalada
United Indians of All Qabiilooyinka Aasaaska
$ 55.7M loogu talagalay Deeqda Xalka Degdega ah si loo taageero waxqabadyada sida wacyigalinta waddooyinka, hawlgallada hoyga degdegga ah, ka hortagga hoy la'aanta, wax ka qabashada deg-degga ah ee deg-degga ah iyo maaraynta kiisaska. Mashruucyadu waa inay noqdaan caqabad hoose oo leh jihaynta Koowaad ee Guriyeynta.
$ 10.9M oo ku jirta Coronavirus Lacag Dheeraad ah oo Dheeraad ah oo loogu talagalay Xafiiska U-doodista Dhibbanayaasha Dembiyada. Wada-hawlgalayaasha waxaa ka mid ah Waaxda Asluubta, Xarumaha U-doodista Carruurta ee Washington, Isbaheysiga Gobolka Washington ee Ka-hortagga Rabshadaha Qoyska, Xafiiska Difaaca Dadweynaha, Xallinta Washington iyo illaa 20 'By iyo For' iyo faa'iido-la'aanta gobolka oo dhan iyo dawladaha hoose.
$ 2.7M waxaan siinayaa Waaxda Asluubta si ay u taageerto dadaallada waxqabadka musiibada.
$ 1M oo loo diro Xarumaha U-doodista Carruurta ee Washington si loogu taageero wareysiyada dambi baarista.
$ 1.1M oo loo diro Xafiiska Difaaca Dadweynaha ee loogu talagalay difaacayaasha dadweynaha ee aan taageerada ka helin magaalooyinka ama gobolada la taageero.
$ 1M si loo Xaliyo Washington si wax looga qabto saameynta faafida.
$ 400,000 oo la siinayo Isbahaysiga Washington ee ka Soo Horjeeda Rabshadaha Qoyska si ay u siiso maalgelin booqashada guriga / kaalmada maaliyadeed ee dabacsan.
Ganacsigu wuxuu u qaybin doonaa inta ka hartay maalgelinta laba fursadood oo tartan ah oo u dhexeeya 'ururada bulshada' iyo ururada samafalka ah iyo dawladaha hoose.
Ganacsigu wuxuu la xiriiray bixiyeyaasha guryeynta ee Sanduuqa Amaanada Guryaha waxayna u soo bandhigeen inay dib u dhigaan lacagihii amaahda ahaa ee loo qorsheeyay si looga caawiyo aafada. Natiijo ahaan, barnaamijku wuxuu ku jiraa habka wax looga beddelayo amaahda 268 si dib loogu dhigo wadarta $ 13.2 milyan oo deyn bixin ah oo la lahaa inta u dhexeysa 2020 iyo dhammaadka 2022.
$ 409 milyan ilaa 315 degmooyin, magaalooyin, iyo magaalooyin. Maalgelinta waxaa la siiyay dowladaha hoose oo leh dad ka yar 500K. Lacagtaan waxaa loo isticmaalay in lagu taageero kharashaadka dawladaha hoose iyo bixinta kheyraadka ay u baahan yihiin bulshadooda, sida deeqaha la siiyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn, gargaarka cuntada, kaalmada kirada, adeegyada daryeelka carruurta, kaalmada korontada, iyo waxyaabo kale oo badan.
$ 1.8 milyan oo ka mid ah deeqaha horumarinta bulshada (CDBG) oo loo qaybiyay 17 degmo oo miyi ah oo hela deeqo dhaqaale oo hadda jira oo CDBG ah oo loogu talagalay dhaqaalaha, guryaha, iyo adeegyada caafimaadka dadweynaha si dhakhso loogu maalgeliyo adeegyada jawaab celinta COVID-19 ee miyiga.
$ 7 milyan gudaha CDBG-Coronavirus lacagaha la siiyay CDBG ee dawladaha hoose ee miyiga ah ee aan diiwaangashanayn:
Barnaamijyada lacag bixinta (3-6 bilood kirada muddada-gaaban, moorgeejka, iyo lacag bixinta adeegga)
Barnaamijyada caawinta Microenterprise
Adeegyada kale ee bulshada: caafimaadka, gurilaawayaasha, latalinta guryaha, adeegyada gaadiidka
$ 10.7 milyan gudaha Lacagta CDBG-Coronavirus shaqaalaha COVID ee gargaarka gaajada iyo deeqaha adeegyada si loogu maalgeliyo shaqaalaha bangiga cuntada; iyo in la dayactiro / la kordhiyo heerarka adeegga gargaarka gaajada heerarka adeegga ee meelaha saboolnimada badan, la buuxiyo ka dib bixitaanka Ciidanka Qaranka, la kordhiyo shaqaalaynta Deeqaha Shaqaalaha, dejinta shaqaalaha iyo taageeridda shaqo joogto ah.
$ 15 milyan gudaha Lacagta CDBG-Coronavirus deeqaha jawaab celinta ee COVID ee magaalooyinka iyo degmooyinka imminka gacanta ku haya maalgelinta CDBG Coronavirus si loo ballaariyo / loo ballaadhiyo waxqabadyada ay maalgeliso maxalliga & gobollada ee CDBG-Coronavirus ee ka jawaabaya kororka kiisaska coronavirus.
$ 3 milyan gudaha CDBG-Coronavirus lacagaha la saadaaliyay, ee aan wali socon, ee COVID ee kahortaga-diyaarinta-jawaab celinta (PPR) deeqaha. Lacag dabacsan oo loogu talagalay waxqabadyada soo ifbaxaya iyo iskaashatooyinka buuxiya u-qalmitaanka CDBG-CV, sida kaalmada sharciga, daryeelka carruurta, guryaha shaqaalaha beeraha, iwm.
$ 1.2M oo ah lacagta LIHEAP si loo bilaabo duuliye bamka kuleylka aan duleelka lahayn bilaha Janaayo.
Lacag ayaa loo qoondeeyay macaamiisha Cimilada ee dakhligoodu hooseeyo ee Washington oo dhan si loogu rakibo nidaamyada Ductless Heat Pump (DHP) oo guriga ku siin doona kuleyl wax ku ool ah. Kaydinta kharashka DHP ee tamarta-ku-ool ah waxay si toos ah u saamayn doontaa biilasha adeegga ee macaamiisheena dan yarta ah. Qaar ka mid ah hay'adaha doortey inay tijaabiyaan tijaabadan ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay ka faa'iideystaan ​​doolarka hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha oo ay ku maalgeliso CARES. Tani waxay si toos ah ugu socotaa mashruuca si looga faa'iideysto macaamiisha dakhligoodu hooseeyo loona kiciyo dhaqaalaha dhismaha guryaha inta lagu jiro aafada.
Xubnaha ka tirsan Unugga Hagaajinta iyo Ilaalinta Guryeynta iyo Guddiga Horumarinta Farsamada ee Cimilada ee gobolka oo dhan ayaa falanqeeyay tilmaamaha amniga gobolka ka dibna qoray tilmaamosi loo ilaaliyo nabadgelyada shaqaalaha cimilada markii loo oggolaado inay ku noqdaan guryaha macaamiisha. Ganacsiga iyo shabakadda cimilada ayaa isku dubariday Guddiga Horumarinta Farsamada, kaas oo horseeday dib u eegista Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada iyo tilmaamaha L&I si ay ula yimaadaan habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo qof walba badqabka inta ay ku maqan yihiin duurka.
Qalabka xogta: qaybinta sanduuqa federaalka ee ARPA
Tani qalabka xogta waxay muujineysaa sida Sharci dejinta Gobolka Washington ay dhowaan ugu qoondeysay miisaaniyadda gargaarka COVID ee ka timaadda Sharciga Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka.
Waxyaabaha kale ee dadaalka ganacsiga:
Kaxee Wi-Fi Goobaha Goobaha - Xafiiska Gobolka Washington ee Broadband oo kaashanaysa Kordhinta Jaamacadda Washington State, Microsoft, Avista Foundation iyo Xarunta Teknolojiyada Aafada ee Teknolojiyada (ITDRC), iyo kuwo kale
Kaqeybgalka wakaalada iyo / ama hogaaminta:
Kooxda Taliska Mideysan
EOC - 34 shaqaale ayaa u hawlgalay EOC; hoggaan heersare ah oo loogu talagalay Jawaab-celinta Ganacsi ee EOC iyo kooxaha u hoggaansamida
Gudoomiyaha Badbaadadiisa, Kooxda Soo kabashada Dhaqaalaha
Tamarta Dhaqaalaha Soo Celinta Dhaqaalaha
ADO COVID koox ka shaqeysa jawaabta
Kooxda ka shaqeysa Soo Celinta Weyn ee Seattle
Kooxda Kabashada Washington